माछामासु छाड्दै हुनुहुन्छ ? पूर्ण शाकाहारी हुनु पनि हुनसक्छ घातक ! - ज्ञानविज्ञान
हामीले यहाँ सम्बन्धित थप जानकरी दिइएका छाै, याे पनि पढ्नुहाेस्
अन्य मांसाहारी खानेकुरामा जस्तै माछामा पनि प्रशस्तै कोलेस्ट्रोल भेट्न सकिन्छ । माछाको जात अनुसार तिनीहरूमा पाइने कोलेस्ट्रोलको मात्रामा पनि फरक पर्दछ । तर कुखुरा, बङ्गुर तथा खसीमा भन्दा माछामा बढि कोलेस्ट्रोल पाइन्छ । कोलेस्ट्रोलको अधिक सेवनले सुगर रोग लाग्न सक्दछ ।
तर, माछाको परिकार बनाउने तरिकाले पनि काँडाको खतरामा फरक पर्दछ । कुनै–कुनै प्रजातिका माछाको काँडा सजिलै छुट्याएर खान सकिन्छ भने कुनैको काँडा मासुसँगै जमेर बसेको हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता माछा खाँदा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
Don't Miss it थकाइ लागेको समयमा यस्ता कार्यहरु फ्रेस बनाउन मद्धत गर्छ !
Up Next रगतमा कसरी बढ्छ कोलेस्ट्रोल, के गर्ने ? के नगर्ने ? जान्नुहाेस्